NjengeeApartments zaseKhaya - I-Airbnb
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguZoi
UZoi ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uZoi iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
ILikeHome yindlu yeendwendwe ezizimeleyo ezi-6 ezinefenitshala epheleleyo eyenziwe ligumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokulala elinye kunye negumbi lokuhlambela labucala.Amagumbi ethu anesitayile abekwe kumgama nje wemizuzu emi-5 ukusuka kumbindi wesixeko saseOrestiada.
Indawo yokungena ebanzi yahlulahlulwe yaba yigumbi lokuhlala eliqaqambileyo elidityaniswe nekhitshi. Kwigumbi lokuhlala uya kufumana iseti yeTV ye-LED enesidlali seDVD kunye nesofa ekhululekileyo nje ukuba ukhetha ukuphumla ngaphakathi.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngeseti epheleleyo yezinto eziluncedo kwaye inayo yonke into onokuyidinga ukuze uzive usekhaya ngexesha lokuhlala kwakho eOrestiada.
Amagumbi okulala aneebhedi ezimbini kunye neewodrophu, ngelixa amagumbi okuhlambela abanzi kwaye acwangciswe kakuhle kakhulu.
Le ndlu inesimo somoya, ukufikelela kwi-Wi-Fi yasimahla, ibhalkhoni yabucala kunye nendawo yokupaka xa ufika ngemoto.
Ungaluqala usuku lwakho ngesidlo sakusasa esimnandi okanye ikofu kwindawo yokubhaka eyoyikekayo kunye nevenkile yasentlango ngaphesheya kwesitrato. Kukwakho nevenkile enkulu esecaleni komnyango ukuze ufumane igrosari okanye nantoni na onokuyifuna.
Siza kuzama ukukunika nayiphi na enye into onokuthi uyifune ukuze uzive ngathi ulikhaya.
Inombolo yomthetho: 0102K133K0184501